Fiteny afrikanina hahazoana teny siantifika efa voajanahary kokoa - AfricaArXiv
navoakan'ny Johanssen Obanda on 20 Aogositra 2021 20 Aogositra 2021
Faly izahay fa nasongadina tao Nature amin'ity herinandro ity, miaraka Masakhane eo am-panatanterahana izao 'Siansa manapotipotika'.
Vakio ny kinova amin'ity lahatsoratra ity amin'ny teny frantsay ecomag.fr/les-langues-africaines-pour-obtenir-plus-de-termes-s Scientifiques-sur-mesure-ecologie-science/
Teny maro mahazatra ny siansa dia mbola tsy voasoratra amin'ny fiteny afrikana. Ankehitriny, ny mpikaroka manerana an'i Afrika dia manova izany.
Ny mpikaroka dia maniry ny hanitatra ny voambolana siantifika amin'ny fiteny afrikanina ao anatin'izany ny Luganda, izay miteny any Afrika Atsinanana. Sary: mpampianatra-mpianatra any Kampala. Bola: Eye Ubiquitous / Alamy
Tsy misy teny isiZulu ho an'ny dinôzôro. Voantso ny mikraoba amagciwane, saingy tsy misy teny misaraka amin'ny virus na bakteria. Quark dia ikhwakhi (tononina kwa-ki); tsy misy teny hoe fiovana mena. Ary ny mpikaroka sy mpampita siantifika mampiasa ilay fiteny, izay ampiasain'ny olona maherin'ny 14 tapitrisa any atsimon'i Afrika, dia miady hevitra amin'ny teny ho an'ny fivoarana.
IsiZulu dia iray amin'ireo fiteny 2,000 eo ho eo ampiasaina any Afrika. Tsy niraharaha ny ankamaroan'ny fiteny ireo ny siansa maoderina, fa ankehitriny ekipa mpikaroka iray avy any Afrika no te hanova izany.Inona ny isiZulu ho an'ny dinôzôro? Ahoana ny fanaovana ambanin-javatra ny siansa amin'ny fiteny afrikana
Nisy tetik'asa fikarohana nantsoina Siansa momba ny fanapotehana mikasa ny handika taratasy ara-tsiansa miisa 180 avy amin'ny mpizara preprint an'ny AfricaArXiv ho amin'ny fiteny afrikana 6: isiZulu sy Sotho Avaratra avy any atsimon'i Afrika; Hausa sy Yoruba avy any Afrika Andrefana; ary Luganda sy Amharic avy any Afrika Atsinanana.
Ireo fiteny ireo dia iraisan'ny olona manodidina ny 98 tapitrisa miteny. Tany am-piandohan'ity volana ity, AfricaArXiv niantso fangatahana avy amin'ny mpanoratra liana amin'ny fandinihana ny taratasiny ho amin'ny fandikana. Ny 20 Aogositra ny fe-potoana farany.
Ireo taratasy nadika dia hahitana taranja siansa, teknolojia, injeniera ary matematika maro. Ny tetikasa dia tohanan'ny Lacuna Fund, mpamatsy vola siantifika ho an'ny mpikaroka amin'ny firenena ambany sy antonony. Natomboka tamin'ny herintaona lasa izay ny mpanao asa soa sy ny mpamatsy vola avy any Eropa sy Amerika Avaratra, ary Google.
Ny tsy fisian'ny teny siantifika amin'ny fiteny afrikana dia misy vokany eo amin'ny tena izy, indrindra amin'ny fanabeazana. Any Afrika Atsimo, ohatra, latsaky ny 10% ny olom-pirenena miteny anglisy ho fitenin-drazany, saingy io no fiteny fampianarana lehibe indrindra any an-tsekoly - zavatra lazain'ny manam-pahaizana fa sakana amin'ny fianarana siansa sy matematika.
Ny fiteny afrikanina dia tavela ao amin'ny revolisiona an-tserasera, hoy i Kathleen Siminyu, manam-pahaizana manokana amin'ny fianarana milina sy fanodinana ny fiteny voajanahary ho an'ny fiteny afrikanina monina any Kenya. “Ny fiteny afrikana dia hita fa zavatra teneninao ao an-trano fa tsy ao an-dakilasy ary tsy miseho eo amin'ny sehatry ny asa. Tsy mitovy amin'ny siansa izany, ”hoy izy.
Siminyu dia ao amin'ny Masakhane, fikambanana ifotoran'ny mpikaroka liana amin'ny fanodinana ny fiteny voajanahary amin'ny fiteny afrikana. Masakhane, izay midika hoe 'miara-manorina isika' ao isiZulu, dia manana mpikambana 400 mahery avy amin'ny firenena 30 eo amin'ny kaontinanta. Niara-niasa nandritra ny telo taona izy ireo.
Ny tetik'asa Decolonise Science dia iray amin'ireo hetsika maro ataon'ny vondrona; ny sasany kosa dia ahitana ny fitadiavana kabary fankahalana any Nizeria ary ny fampianarana algorithma momba ny milina mba hahafantarana ny anarana sy ny toerana afrikanina.
Farany, ny Science Decolonise dia mikendry ny hamorona glosarium an-tserasera amin'ny teny siantifika amin'ny fiteny enina, ary hampiasana azy ireo hampiofanana ny algorithma fianarana milina ho an'ny fandikana. Manantena ny mpikaroka ny hamita ity tetik'asa ity amin'ny fiandohan'ny taona 2022. Saingy misy ambiny lehibe kokoa: ny hampihenana ny mety hahatonga an'ireo fiteny ireo ho lany andro amin'ny fanomezana azy ireo toerana matanjaka kokoa an-tserasera.
Saingy “tsy te hanana teny vaovao tanteraka izahay”, hoy i Sibusiso Biyela, mpanoratra ao amin'ny ScienceLink, orinasam-pifandraisana siantifika monina ao Johannesburg izay mpiara-miasa amin'ilay tetikasa. “Tianay ny olona izay mamaky an'io lahatsoratra na teny io hahatakatra ny dikan'io amin'ny fotoana vao hitany.”
Biyela, izay manoratra momba ny siansa amin'ny isiZulu, matetika dia mahazo teny vaovao amin'ny fijerena ny faka Grika na latinina misy ny teny siantifika amin'ny teny anglisy. Ny planeta, ohatra, dia avy amin'ny teny grika taloha planētēs, izay midika hoe 'mpirenireny', satria ny planeta dia tsikaritra fa hamakivaky ny lanitra amin'ny alina. Ao amin'ny isiZulu, lasa ity umhambi, izay midika koa hoe mirenireny. Teny iray hafa ilazana ny planeta, ampiasaina amin'ny rakibolana an-tsekoly, dia umhlaba, izay midika hoe 'Tany' na 'izao tontolo izao'. Ireo teny hafa dia milazalaza: ho an'ny 'fossil', ohatra, i Biyela no namorona ilay andianteny mahambo amadala atholakala emhlabathini, na 'taolana taloha hita amin'ny tany'.
Amin'ny sehatra siantifika sasany, toy ny fikarohana biodiversité, ny mpikaroka izay mitady ny teny mety dia mila miditra amin'ny loharanom-baovao. Lolie Makhubu-Badenhorst, talen'ny talen'ny biraon'ny fandaminana ny teny sy ny fampandrosoana ao amin'ny Oniversiten'i KwaZulu-Natal any Durban, dia nilaza fa ny tsy fisian'ny teny siantifika avy amin'ny angon-drakitra an-tsoratra dia tsy midika hoe tsy misy izany. “Miorina amin'ny soratra ianao, mifantoka amin'ny vava aho. Eo ny fahalalana, saingy tsy voarakitra an-tsoratra tsara izany ”, hoy i Makhubu-Badenhorst, izay tsy ao anatin'ny tetikasa Decolonise Science.
Ireo manam-pahaizana momba ny voambolana Decolonise Science dia hanana rafitra hamolavola ireo teny siantifika isiZulu, hoy i Biyela. Raha vantany vao vita izany dia hampiharin'izy ireo amin'ny fiteny hafa.
Hanolotra ny glositer-ny ho ekipa ho fitaovana maimaimpoana ho an'ireo mpanao gazety sy mpampita hevitra siantifika ny ekipa, ary koa ny birao fitenim-pirenena, oniversite ary orinasa teknolojia izay manome fandikan-teny mandeha ho azy. “Raha mamorona teny ianao ary tsy ampiasain'ny hafa, dia tsy hiditra ao amin'ilay fiteny izany,” hoy i Biyela.
Miantso vonjy i Google mba hanatsarana ny kalitaon'ny fandikan-teny afrikanina ao aminy. Bola: Cristina Aldehuela / AFP avy amin'i Getty
Teknolojia lehibe: 'mila ny fanampianao izahay'
Nilaza ny mpikaroka Masakhane fa ny orinasa teknolojia manerantany dia tsy niraharaha ny fiteny afrikana ara-tantara, saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanomboka nanohana ara-bola ny fikarohana izy ireo.
"Fantatray fa ireo fiteny afrikana an'arivony maro dia tsy dia misolo tena firy amin'ny rindrambaiko fandikan-teny", hoy ny mpitondra tenin'i Google Nature. Te-hanitatra ny fandikan-teny Google ny goavambe teknolojia mba hahitana fiteny afrikana maro kokoa, ao anatin'izany ny Twi, Ewe, Baoulé, Bambara, Fula, Kanuri, Krio, Isoko, Luganda, Sango, Tiv ary Urhobo, hoy ihany izy ireo. Na izany aza, mila "mpandahateny ireo fiteny ireo izy ireo hanampy antsika hanatsara ny kalitaon'ny fandikan-teninay" mba hahafahan'izy ireo miditra ao anaty serivisy.
"Ny hevitra lehibe dia ny fananana kolontsaina ny siansa," hoy ny fanazavan'i Biyela. Samy nilaza izy sy Abbott fa zava-dehibe ny famongorana ny siansa amin'ny alàlan'ny famelana ny olona hanao fikarohana sy hiresaka momba ny siansa amin'ny fitenin'izy ireo. Amin'izao fotoana izao, azo atao ny mampiasa ny fiteny afrikanina hiresaka politika sy fanatanjahantena fa tsy ny siansa, hoy i Biyela.
Toy izany koa, ny teny anglisy no fiteny manjaka amin'ny fitantanana sy fiarovana ny tontolo iainana - fa raha tsy takatry ny olona ny dikan'ny teny sy ny foto-kevitra manokana ary afaka miresaka momba azy ireo amin'ny fitenin-drazany izy ireo dia afaka mahatsapa fa tapaka amin'ny ezaka ataon'ny governemanta hitahiry ny tontolo iainana sy ny karazany, hoy i Bheka Nxele. , mpitantana fandaharana ho an'ny ekolojia famerenana amin'ny laoniny, fandrindrana ny tontolo iainana ary fiarovana ny toetrandro ao amin'ny kaominin'i eThekwini any Afrika Atsimo.
Manahy ny mpikaroka fa raha tsy ampidirina amin'ny algorithma an-tserasera ny fiteny afrikana dia mety ho lany andro sy hadino izy ireo amin'ny farany. “Ireo dia fiteny [olona] tenenina. Ireo no fiteny ampiasain'izy ireo isan'andro, ary miaina miaraka sy mahita ny zava-misy marina ao izy ireo x isan'ny taona, mety maty ny fitenin'izy ireo satria tsy misy dian-dizitaly, ”hoy i Siminyu.
Sokajy:	Fampandrenesanafiaraha-miasaFomba fiteny
Tags: Siansa momba ny fanapotehanafiteny samihafaMasakhaneNaturempanao gazetyMandika Siansa